यी हुन् करोडपति बनाउने संकेत, कतै तपाईले त देख्नुभएन ? – Sandesh Press
यी हुन् करोडपति बनाउने संकेत, कतै तपाईले त देख्नुभएन ?
September 5, 2021 193
काठमाडौँ । केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई धन प्राप्त हुने बारेमा पहिले नै बताई दिन्छन्। त्यस्ता संकेतलाई सम्झनु आवश्यकता हुन्छ।केही यस्ता संकेत छन् जसले भविष्यमा कसरी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पहिलेनै संकेत दिन्छ।
जुन यसप्रकार छन् हिन्दु धर्ममा शुभ र अशुभको पुरानो मान्यता अझैपनि जिवितै छ। विभिन्न संकेतका आधारमा शुभ र अशुभका बारेमा जान्न सकिन्छ।केही यस्ता संकेत छन् जसले भविष्यमा कसरी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पहिलेनै संकेत दिन्छ। जुन यसप्रकार छन्ः
कहिँ जाँदै गरेको अवस्थामा यदि बाटोमा सुन्दर महिला या कन्या देखियो भने त्यसलाई धनप्राप्तीको संकेत मान्न सकिन्छ।
जो व्यक्ति सपनामा मोती, गंगा, हार, मुकुट देख्छ उसको घरमा सधैं लक्ष्मीको बास हुन्छ। जसले सपनामा कुमालेले घैँटो बनाएको देख्छ उसलाई पनि धन प्राप्त हुन सक्छ। जो मानिसले आफुलाई टाउको खुइलिइएको अवस्थामा देख्छ उसलाई पनि धन प्राप्ति हुन सक्छ।
विहिबारको दिन कुनै कुमारी कन्यालाई पहेँलो बस्त्रमा देख्नु भयो भने पनि शुभ संकेत मान्नुहोस् तपाईलाई धन लाभ हुन सक्छ।
दीपावलीको दिन यदी कोही सुन्दरी साज–सज्जाका साथ देखिइन् भने तपाईंलाई पनि धन प्राप्त हुने संकेत हुन सक्छ।
विहान सुतेर उठेको बेलामा यदी कोही मगन्ते या जोगी तपाईंको ढोकामा आयो भने त्यसलाई खाली हात नफर्काउनुहोस्। किनकी तपाईलाई नमागीकनै धन प्राप्ती हुन सक्छ।
यदी तपाईंको दाहिने भागमा या सिधा हातमा लगातार चिलाई रह्यो भने सम्झनुहोस् तपाईंलाई धन प्राप्त हुन सक्छ।
यदि कोई यात्री घर फर्कि रहेको हुन्छ र बायाँ तिर रोकियो भने उसलाई थोरै समयका लागि धनप्राप्त हुन सक्छ । यदि कुनै व्यक्तिले कुनै गाउँ वा नगरमा प्रवेश गर्ने समयमा दायाँ तर्फ सुँगुर देखियो भने उसलाई धन प्राप्त हुन सक्छ।
यदि कोही सपनामा टाउको कन्याउँदै गरेको देखियो भने त्यसकै कारण पैसा मिल्न सक्छ । यदी आँखा कन्याउँदै गरेको देखे भने पनि पैसा मिल्न सक्छ। सपनामा गाडेको धन देखियो भने पनि सम्पत्ति वृद्धि हुन सक्छ।
जब कुकुरले अचानक जमीनमा पटक पटक टाउको रगडेको देख्नु भयो भने त्यस्तो ठाउँमा गाडेको धन हुन सक्छ। साथै यदी कुकुरले कुनै खाद्यपदार्थ खाएको देखेमा अशुभ मानिन्छ।
Prevबिहान तामाको भाँडाको पानी पूरै घरमा छर्किनुहोस्, हटेर जान्छ नकारात्मक उर्जा, हुन्छ धनको वर्षा
Nextआजपनि मुलुकभर वर्षा, काठमाडौँ उपत्यकासहित यी ३ प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
अबको ३ दिन नै यी ठाउँमा चट्याङ्गसहित पानी पर्ने, मौसमविद्ले दिए यस्तो चेतावनी !